Mgbe aga Thailand | Akụkọ Njem
Maria | | General, Tailandia, Asia njem
Thailand bụ otu ebe kachasị mma maka ndị njem mgbe ị na-eme atụmatụ ezumike ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia. A na-ahụta ya ụzọ dị mma iji chọpụta kọntinent ahụ: enwere ụgbọ elu dị ọnụ ala sitere na Europe, ókèala ya dị mfe ịnyagharịa ma jupụtakwa n'ihe ị ga-ahụ ma mee na-enweghị nnukwu nsogbu dị egwu. Thailand nwere ya niile: mkpọmkpọ ebe mgbe ochie, obí eze ọla edo na ụlọ arụsị, nri na-atọ ụtọ, obodo na-ese n'elu mmiri na oke osimiri mara mma.
Ugbu a, ndị njem niile tinyere anya ha ebe a nwere otu ajụjụ, mgbe ha ga-aga Thailand? Ọ ka mma ịga njem n'oge udu mmiri ka ọ bụ n'oge ọkọchị? Anyị na-edozi obi abụọ gị, n'okpuru.
N'ịbụ nke dị n'Oké Osimiri Andaman na Ọwara nke Thailand, ifufe udu mmiri na-enwe mmetụta na ihu igwe ebe okpomọkụ, si otú a na-ekewa ókèala ahụ na mpaghara ihu igwe abụọ, n'ebe ugwu na ndịda, Okwesiri ka ichota mgbe anyi ga-aga Thailand dabere na atumatu anyi n’oge ezumike. Buru n'uche na ihu igwe bụ ihe a na-ejighị n'aka, ya mere, a ga-ewere data a dịka ihe naanị na-enye nkọwa.
1 Mgbe ịga Thailand
1.1 Northern Thailand
1.2 Ndịda Thailand
2 Ndụmọdụ maka njem na Thailand
Myanmar, Laos, Cambodia na Vietnam bụ steeti gbara gburugburu ugwu Thailand na ebe enweghị oke osimiri, yabụ ebe kachasị ewu ewu na-adọta ọtụtụ narị ndị njem bụ Chiang Mai na Chiang Rai.
Oge kacha mma iji gaa n'ebe ugwu Thailand bụ site na Ọktọba ruo Febụwarị, ebe ọnwa ndị ahụ na-ajụ oyi na okpomọkụ nke 33 Celsius C n'ihi oke mmiri ozuzo ugwu ọdịda anyanwụ. Ọnwa kachasị mma bụ Nọvemba na Disemba, ọkachasị. Julaị ruo Septemba bụ oge udu mmiri na-adị na mgbago ugwu Thailand. Ọ bụrụ na njem gị dabara n'oge a, ihe kacha baa uru bụ ka ị ghara igbochi oke mmiri ozuzo ahụ n'ihi na ọ pụtaghị na mmiri na-ezo n'oké osimiri n'oge ọnwa ndị ahụ ụbọchị niile, ezumike gị ga-emebi. Echegbula onwe gị, nke kachasị bụ na ọ na-acha anwụ na-acha, n'ehihie, igwe ojii ga-agbapụta mmiri n'ehihie, anyanwụ ga-achakwa ọzọ.
Ọ bụrụ na ebumnuche gị abụghị naanị ịga n'akụkụ osimiri kama ịga leta n'ozuzu na Thailand, oge udu mmiri na-enye gị akụkụ nke mba ahụ kwa ụbọchị, nke ndị obodo na-ahụ kwa ụbọchị.. Ọ bụrụ na mmiri ozuzo abịa, ị ga-eme dị ka ha, leghara ya anya, nwee mmiri, gaa n'ihu na njem mmụta ma kpoo na anwụ ebe anwụ. Na mgbakwunye, n'oge udu mmiri, ebe ọdịda anyanwụ na ubi osikapa na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke anyị hụtụrụla na akwụkwọ ozi dị na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia.
N'oge ọkọchị na mgbago ugwu Thailand, site na Machị ruo Juun, ọ na-ekpo ọkụ nke ukwuu na ọnọdụ 40 Celsius C nwere ike ịbụ ihe ndị Europe na-agaghị anabata. Na mgbakwunye, oke ọhịa kpọrọ nkụ ma osikapa na-acha aja aja yabụ ahụmịhe adịghị mma dịka oge mmiri ozuzo.
Igwe mmiri anaghị emetụta n'ebe ndịda Thailand, nke zuru oke maka ndị njem niile na-enubata na mmiri ma ọ bụ n'ụsọ Oké Osimiri Andaman iji nwee obere paradaịs n'elu ụwa. Ebe kachasị ewu ewu na Thailand bụ Bangkok, Ohuket, Khao Lak na Koh Samui, ndị dị na ndịda obodo ahụ.
Oge kachasị mma iji leta ha bụ site na Nọvemba rue Machị. Okpomọkụ dị nwayọọ ma mmiri ozuzo dị ala, ọ bụ ezie na enwere obere ohere mmiri ozuzo. N'ime ọnwa ndị a, e nwere ọtụtụ ndị njem nleta na-eji ihu igwe dị mma maka oge dị elu na ndịda Thailand.
Ndụmọdụ maka njem na Thailand
Na ụkpụrụ, Thailand bụ mba dị mma maka ndị ọbịa ebe ọ bụla ọ dị mma ilekọta ihe anyị ma ọ bụ kpachara anya maka ndị bịara abịa na-eme enyi ma ọ bụ ndị ohi, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-eme njem naanị gị.
Asụsụ gọọmentị nke mba ahụ bụ Thai n'agbanyeghị agbanyeghị Bekee, ọ kachasị na mpaghara ndị njem na n'etiti ndị na-eto eto, dịka a na-akụzi ya n'ụlọ akwụkwọ.
Akwụkwọ ego nke Thailand bụ baht mana iji kaadị kredit gbasasiri ike, ma ọ bụ Mastercard ma ọ bụ Visa iji wepụ ego na ịkwụ ụgwọ.
Onye kacha mma njem njem ebe ọ bụla n'ụwa bụ ịnweta mkpuchi njem dị mma nke na-echebe anyị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ nlekọta ahụike n'oge ezumike. Agbanyeghị na ọtụtụ ebe ndị njem nleta na-enye nlekọta ahụike dị mma na Thailand, ịgagharị n'ime ime obodo nwere nsogbu ụfọdụ. Mgbochi dị mma karịa ọgwụgwọ.
Achọghị ndị njem si n'ọtụtụ mba maka visa maka ọnụnọ nke ụbọchị 30. Na ọtụtụ mba na Europe na United States, Thailand nwere nkwekọrịta iwepụ visa ka ụmụ amaala ya nwee ike ịbanye na mba ahụ na-enweghị ịrịọ akwụkwọ na enweghị ọnụahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Mgbe ịga Thailand